Craftcoin စျေး - အွန်လိုင်း CRAFT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Craftcoin (CRAFT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Craftcoin (CRAFT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Craftcoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Craftcoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Craftcoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
CraftcoinCRAFT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00034CraftcoinCRAFT သို့ ယူရိုEUR€0.00029CraftcoinCRAFT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00026CraftcoinCRAFT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000312CraftcoinCRAFT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00306CraftcoinCRAFT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00216CraftcoinCRAFT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.00758CraftcoinCRAFT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00128CraftcoinCRAFT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000452CraftcoinCRAFT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000476CraftcoinCRAFT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.00762CraftcoinCRAFT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00263CraftcoinCRAFT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00183CraftcoinCRAFT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0254CraftcoinCRAFT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.0573CraftcoinCRAFT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.000467CraftcoinCRAFT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.000517CraftcoinCRAFT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0106CraftcoinCRAFT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00236CraftcoinCRAFT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0362CraftcoinCRAFT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.403CraftcoinCRAFT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.131CraftcoinCRAFT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0248CraftcoinCRAFT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.00938
CraftcoinCRAFT သို့ BitcoinBTC0.00000003 CraftcoinCRAFT သို့ EthereumETH0.0000009 CraftcoinCRAFT သို့ LitecoinLTC0.000006 CraftcoinCRAFT သို့ DigitalCashDASH0.000004 CraftcoinCRAFT သို့ MoneroXMR0.000004 CraftcoinCRAFT သို့ NxtNXT0.0278 CraftcoinCRAFT သို့ Ethereum ClassicETC0.00005 CraftcoinCRAFT သို့ DogecoinDOGE0.102 CraftcoinCRAFT သို့ ZCashZEC0.000004 CraftcoinCRAFT သို့ BitsharesBTS0.013 CraftcoinCRAFT သို့ DigiByteDGB0.0111 CraftcoinCRAFT သို့ RippleXRP0.00121 CraftcoinCRAFT သို့ BitcoinDarkBTCD0.00001 CraftcoinCRAFT သို့ PeerCoinPPC0.00115 CraftcoinCRAFT သို့ CraigsCoinCRAIG0.158 CraftcoinCRAFT သို့ BitstakeXBS0.0148 CraftcoinCRAFT သို့ PayCoinXPY0.00605 CraftcoinCRAFT သို့ ProsperCoinPRC0.0435 CraftcoinCRAFT သို့ YbCoinYBC0.0000002 CraftcoinCRAFT သို့ DarkKushDANK0.111 CraftcoinCRAFT သို့ GiveCoinGIVE0.75 CraftcoinCRAFT သို့ KoboCoinKOBO0.0789 CraftcoinCRAFT သို့ DarkTokenDT0.000313 CraftcoinCRAFT သို့ CETUS CoinCETI1